Waa kuma Macallimu, ninka dartii xilka looga qaaday Madaxii Shaqaalaha NISA ? | Gaaroodi News
Waa kuma Macallimu, ninka dartii xilka looga qaaday Madaxii Shaqaalaha NISA ?
Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji Macallimu, ayaa maalin ka hor gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo, halkaas oo uu ka billaabay dhaq-dhaqaaq siyaasadeed.
Macallimu oo xilka laga qaaday bishii January 2021, ayaa sheegay in maamulkii uu ka tirsanaa ee diiddanaa maamulka Jubaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe uu dhibaato u horseeday gobolka.
“Waa nala yiri Axmed Madoobe la dagaallama, haddana korkeena ayaa lagu aqoonsaday oo laba sano lagu siiyay,” ayuu yiri Macallimu.
Haddaba halkan ka ogow saddex arrin oo ku saabsan Macallimu.
Macallimu iyo Cabdullahi Kulane
Bartamihii bishii June ee sanadkan, Macallimu oo waraysi siiyay BBC ayaa sheegay in isaga iyo dad uu ku sheegay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo ay caasimadda Muqdisho ugu xayiran yihiin madaxii shaqaalaha ee hay’adda NISA, Cabdullahi Kulane.
“Arrinta nalagu haysto ayaa ah in nalaga hor joogsado doorashada dalka ka dhacaysa, taas oo ka dambeeyo taliye kuxigeenka NISA, Cabdullahi Kulane, mana aha wax aan yeelayno,” ayuu xilligaas Macallimu u sheegay BBC.
Isku-day aan ku raadinayo ninka la eedeeyay ayaa guuldaraystay, mana jirto meel ay hay’adda NISA ku beenisay eedeyntaas uga timid Macallimu.
21-kii July ayaa guddigii uu ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble u saaray arrinta Gedo waxa ay ku taliyeen in la joojiyo muwaadiniinta laga celinayo garoomada dalka. Arrintaas ayaa u muuqatay mid jawaab u ah Jubaland oo horay looga celiyay dad siyaasad ahaan diiddan maamulka halkaa ka jira.
Ra’iisal wasaare Rooble ayaa si adag ugu nuux-nuuxsaday in tallaabo uu qaadayo haddii ay dhacdo in muwaadin Soomaaliyeed laga celiyay gudaha dalka.
Maalin kadib amarka ra’iisal wasaaraha, Cismaan Nuur Xaaji Macallimu, ayaa warbaahinta u sheegay in laga celiyay garoonka Muqdisho, isagoo tallaabadaas ku eedeeyay taliye Cabdullahi Kulane.
Saacado kadibna, ra’iisal wasaaraha ayaa shaaciyay in uu xilka ka qaaday Cabdullahi Kulane, iyo madaxii sirdoonka ee garoonka Aadan Cadde, Cabdiwahaab Sheekh Cali. Tallaabadan ayuu ra’iisal wasaaraha uga jawaabay cabashadii Macallimu.
Macallimuu ayaa ahaa ninka ugu magaca dheer maamulkii Gedo ka jiray sanadkii 2020, xilligaas oo ciidamada Federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland ay dhowr jeer ku dagaallameen magaalada istaraatiijigga ah ee Beled Xaawo.
Macallimu oo la sheegay in horay uu uga tirsanaa ciidanka dowladda ayaa ka soo muuqan jiray furimaha dagaalka, waxaana uu mar u hanjabay Kenya.
“Kenya deris baan nahay ee derisnimada ha ilaaliso. Haddii ay ilaalin weydo, waxaan amrayaa ciidankeena inay Nairobi ka casheeyaan,” ayuu horraantii febrero 2020 yiri Macallimu.
Gedo waxaa markaas dowladda kula dagaallamayay ciidamo ka tirsan Jubaland oo uu hogaaminayay
Bishii December 2020 ayaa waxaa soo shaac baxay khilaaf u dhexeeyay mas’uuliyiintii maamulka Gedo ee taabacsanaa dowladda Federaalka.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo markaas ahaa wasiir kuxigeenkii arrimaha gudaha Jubaland balse u wareegay dhanka dowladda Federaalka ayaa soo saaray warqad uu shaqo joojin ku sameynayo gudoomiye Cismaan Nuur Xaaji Macallimu.
Warqadda shaqo joojinta ayaa lagu sheegay in Macallimu uu ku takri-falay awooddiisa, isla markaana uu sameeyay uu si sharci darro ah xilal u magacaabay. Muddo kadib ayaa waxaa soo baxday warqad kale oo lagu sheegay in lagu xalliyay arrinta Macallimu. Macallimu ayaa xilka ku wareejiyay Axmed Buule Gareed
Bartamihii January 2021, Macallimu ayaa xilka ku wareejiyay Axmed Buulle Gareed oo tan iyo xilligaas ahaa gudoomiyaha Gedo.
Macallimu ayaa wixii markaa ka dambeeyay u wareegay magaalada Muqdisho.
Hadda waxa uu u muuqdaa mid diiddan maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).